बलिउड Archives - Page 13 of 15 - www.kchhakhabar.com
बलिउड सेलिब्रिटीका आपसी झगडा जुन अहिलेसम्म सुल्झिन सकेका छैनन्
करन जोहरले आफ्नो बायोग्राफीमा काजोल र अजयसँग आफ्नो झगडाको बारेमा निकै खुलेर बताएका छन् । कुनै बेला निकै मिल्ने साथी रहेका करन र काजोल आजकाल एक अर्काको नाम पनि सुन्न चाहँदैनन् । यद्यपी, बलिउड उद्योगमा मित्रबाट शत्रु बनेका करन र काजोल पहिलो उदाहरण भने होइन । उनीहरुलाई गन्ती नगर्ने हो भने पनि बलिउडमा अन्य सेलिब्रिटी पनि यो सूचीमा समावेश गर्न सकिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा यसबारे हामी तपाईंलाई जानकारी दिँ...
मंगलबार, माघ ०४, २०७३
प्रियंका चोपडाको सिनेमामा छनौट भइन् यी नेपाली अभिनेत्री
काठमाडौं, माघ ३ – बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले निर्माण गर्न लागेको सिक्किम बेस्ड नेपाली सिनेमा पौवामा अभिनेत्री मन्जु क्षत्री छनौट भएकी छिन् । २०१३ देखि अभिनय यात्रा थालेकी मञ्जुले नेपाली टेलिसिरियल मेरी बास्सैमा खड्का जीकी कान्छी श्रीमतीको भूमिका निभाएकी थिइन् । प्रियंका चोपडाको सिनेमामा मञ्जु अडिशन पछि फाईनल भएकी हुन् । मञ्जुले सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालयबाट एम.बि.ए सकेकी छिन् । प्रिय...
सोमबार, माघ ०३, २०७३
दिपीकालार्इ अाफ्नै लुगाले धाेका दिएपछि यस्ताे भयाे …..
एजेन्सी । कहिलेकाही अाफैले लगाएकाे पहिरनले धाेका दिदा कस्ताे महसुस हुन्छ अाफै बिचार गर्न सकिन्छ । मान्छेकाे भिडमा अाब्रुक राख्ने तिनै कपडाले बलीउडकी हस्ती दिपिका पादुकाेणलार्इ पनि दिनुसम्मकाे धाेका दिएकाे छ । हालैमात्र हलिउड नायक भेन डिजेलसंग XXX:रिटर्न अफ जेण्डर केज’मा अभिनय गरिसकेकी बलिउड नायिका दिपीका साेही फिल्मकाे प्रिमियर साे हुदै गर्दा उनलार्इ लगाएकाे कपडाले धाेका दिएकाे थियाे । शोम...
सुटिङ गर्दागर्दै दुर्घटनामा परिन पियंका ! त्यसपछि के भयाे ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफ्नो अमेरिकी टेलिभिजन शो ‘क्वाटिको–२’को सुटिङका क्रममा दुर्घटनामा परेकी छिन् । एफबीआई ड्रामा सीरीज ‘क्वाटिको सीजन–२’को एउटा एक्सन दृश्य दिने सुटिङका क्रममा चिप्लिएर लडेकी थिइन् । उनको टाउँकोमा चोट लागेको बताइएको छ । खबरअनुसार, प्रियंकालाई तत्कालै अस्पताल पुर्याइएको छ, उनलाई उपचारका लागि केही दिनको छुट्टी दिइएको छ । प्रियंकाको प्रवक्ताले दुर्घटनाको पु...
श्रीमती छाडेका ऋतिकको नयाँ हिरोइनसँग हट अवतार (फोटो फिचर)
मुम्बई । श्रीमती सुजैन खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन एक नयाँ अभिनेत्रीसँग हट अवतारमा देखिएका छन् । एसियाकै सेक्सी पुरुषको उपाधि पाएका ऋतिकले अभिनेत्री लिजा हेडनसँग बोगको कभर फोटोका लागि एकसाथ हट फोटोशुट गराएका हुन् । उनको केमिस्ट्री निकै इन्टेन्स लागिरहेको छ । यी दुबैको तस्वीरले हटनेसको सबै रेकर्ड तोडेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । हेर्नुस् तस्वीरहरुः ...
आइतबार, माघ ०२, २०७३
ओम पुरीको मृत्यु थप शंकास्पद, मोबाइल अझै फेला परेन
काठमाडौं । गत शुक्रवार निधन भएका भारतीय अभिनेता ओम पुरीको मृत्युको कारणबारे आशंका बढ्दै गएको विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरुलाई उद्धृत गर्दै एनडिटिभी इन्डियाले जनाएको छ । सो समाचारका अनुसार प्रहरीले ओम पुरीले बोक्ने गरेको मोबाइल फोन अझैसम्म प्रहरी प्राप्त गरेको छैन । पुलिसले सो मोबाइलमार्फत प्रहरीले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि ओम पुरीले कोसँग के कुराकानी गरेको पत्ता लगाउन चाहेको बताइएको छ । जनवरी ६ मा निध...
बिहिबार, पौष २८, २०७३
ओमपुरीले गौतम बुद्धको जन्म भूमी नेपालमा देह त्याग गर्न चाहेको खुलासा
एजेन्सी । ओम पुरीकी जनसम्पर्क अधिकारी स्मिता सिंहले ओम पुरी बारे नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । उनका अनुसार ओम पुरीले मृत्युको एक हप्ता पहिलेदेखि नेपालमा आएर आफ्नो देह त्याग्ने बारे कुराकानी गरिरहेको एक भारतीय मिडियासँगकमो कुराकानीमा उनले जानकारी दिएकी छिन् । उनका अनुसार ओमपुरीले अज्ञातवश एकाएक लुम्बिनी जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालको लुम्बिनीमा आफ्नो प्राण त्याग गर्न चाहेको बताएका थिए । ...
ओम पुरीको मृत्यु सम्बन्धि ६ नयाँ खुलासा
ओम पुरीको संदिग्ध हालतमा भएको मृत्यु र पोष्टमर्टम रिपोर्टमा टाउकोमा घाउको निशाना भेटिएपछि मुम्बई पुलिसले अनुसन्धान तीब्र गरिदिएको छ । शनिबार ओम पुरीका ड्राइभर राम प्रमोद मिश्रा र निर्माता खालिद किदवईलाई तीन घण्टा आमने–सामने बसाएर सोधपुछ गरिएको स्रोतले बताएको छ । साथै, पुलिसले पुरीका कान्छी श्रीमती नन्दितालाई पनि सोधपुछका लागि बोलाइएको थियो तर उनी त्यहाँ उपस्थित भइनन् । यतिमात्र होइन, नन्दिताले बैं...
आइतबार, पौष २४, २०७३
सलमान खान आइएसआइएसका एजेन्ट ! उनको हत्या गर्ने मिति तय
बिग बसको १० औं संस्करणको सबैभन्दा चर्चित प्रतिस्पर्धीमा स्वामी ओमजीको नाम आउँछ । बिग बसका अन्य सदस्यसँग उनको लगातार विवाद हुँदै आएको छ । आफूलाई भारतीय संस्कृतिको समर्थक र पोषक बताउने स्वामी ओमका विभिन्न चरित्र बिग बसमा हेर्न पाइयो । बिग बस १० का सबैभन्दा विवादित प्रतिस्पर्धी स्वामी ओमजीले भारतीय एक संचारमाध्यमसँग कुराकानी गरेका छन् जसमा उनले सलमानलाई आइएसआइएसका एजेन्ट हुन् भनी पटक पटक दाबी...
अनिल कपूरद्वारा अवार्ड फङसनमै छोरीको आलोचना (तश्विर सहित)
एजेन्सी | अनिल कपूर आफ्नी छोरी सोनमसँग अनुशासनको बिषयलाई लिएर अवार्ड कार्यक्रममै आक्रोशित भएका छन् । अवार्ड फंक्शनमा अनिल र सोनम दुवै सामेल भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा फिल्म ‘नीरजा’ का निर्देशक राम माधवानी र ‘पिंक’ का अनिरुद्ध राय चौधरीलाई २०१६ को बेस्ट फिल्ममेकर अवार्ड प्रदान गरियो । यसैक्रममा जब अनिल कपुरले नीरजाको सबै समुहलाई मन्चमा बोलाए । तर सबैजना आए पनि उनकी छोरी सोनम भने उपस्थित भइनन । ...
शुक्रबार, पौष २२, २०७३